တရုတ်ရော်ဘာ Stator နှင့် Flotation စက်စက်ရုံနှင့်ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူများ | Arex
ရော်ဘာ Stator နှင့် Flotation စက်၏ရဟတ်
XJK စီးရီး၊ XJQ စီးရီး၊ SF စီးရီး၊ BF စီးရီး၊ KYF စီးရီး၊ XCF စီးရီး၊ JJF စီးရီး၊ BS-K စီးရီးများရှိ Flotation စက်များတွင်အဓိကအသုံးပြုသည်။
Flotation စက်၏ rotor နှင့် stator ကိုအဓိကအားဖြင့်သတ္တုအရိုးစုများနှင့် ၀ တ်ဆင်နိုင်သောရာဘာများဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည်။ သတ္တုအရိုးစုများကိုထည့်သွင်းထားသောအဆင့်မြင့်မီးတောက်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီးအလွန်တိကျသောလုပ်ငန်းစဉ်စံချိန်စံညွှန်းများဖြင့်တိကျစွာဂဟေဆော်နိုင်သည်။ အရိုးစုထည့်သွင်းမှု၏အစွမ်းနှင့်ချိန်ခွင်လျှာစွမ်းဆောင်ရည်ကို dynamic balancer မှတစ်ဆင့်ထိန်းညှိမှုကိုထိန်းညှိပေးသည်။ ရော်ဘာရဟတ်နှင့် flotation စက်မျက်နှာပြင်၏ stator ကို wear ခံနိုင်သည့်ရော်ဘာဖြင့်ကပ်ထားပြီးနောက်အပူချိန်မြင့်မားသောနေရာတွင် vulcanized လုပ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီ၌ကြီးမားသောပြားချပ်ချပ်ပြား vulcanizer တန်ချိန် ၃၆၀၀ တန်ရှိပြီးအနံ ၂၀၀ မှ ၂၄၀၀ မီလီမီတာအတွင်းရှိ rotor နှင့် flotation စက်၏ stator ကိုထုတ်လုပ်နိုင်စွမ်းရှိသည်။ ၀ ယ်လိုအားသည်အထူးသီးသန့်ဖြစ်ပါကဖောက်သည်များ၏လိုအပ်ချက်နှင့်အညီပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။
အက်စစ် (အခြေစိုက်စခန်း) ကိန်း 20% H₂SO₄ （20% NaOH） 18 ℃ x24h
ချိုးမှာ elongation ≥
Shore မာကျောမှု A
ပူလေကောင်းလေအိုမင်းကိန်း≥90 24 x24h
ရေနံကိန်း 20 # ရေနံ 100 ℃ x24h
1. အရေးပါသောinရိယာ၌ wear ပုံစံများနှင့်နှုန်းကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်းနှင့်လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုမှတစ်ဆင့်စရိုက်လက္ခဏာကိုအားဖြည့်ခြင်း။
၂။ ရော်ဘာနှင့်ပိုလီယမ်ပိုပစ္စည်းများကိုပိုသောအစိတ်အပိုင်းများအများဆုံးလိုအပ်သည့်နေရာတွင်အသုံးပြုပါ။ ဤရွေ့ကား, အလုပ်လုပ်ဘို့ဘဝ elongate ပါလိမ့်မယ်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များကအသုံးပြုသည့်အခါ 3. ပရော်ဖက်ရှင်နယ်စစ်ဆေးခြင်းနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုပေးခြင်း။ စက်ရုံရရှိနိုင်မှုကိုထောက်ပံ့ပြီးတိုးမြှင့်ပေးမည့်စစ်ဆင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွင်ပုံမှန် update update ကိုရရှိခြင်း။
1. ကုန်ကြမ်းသည်သံချေးနှင့်သံချေးတက်လျှင် 3CR12 သံမဏိအကြီးအကဲများကိုအသုံးပြုသည်။
2. အတွေ့အကြုံရှိအလုပ်သမားများက ISO စံနှုန်းများကို welding လုပ်ငန်းစဉ်မှတုန့်ပြန်နှင့် groove သည့်အခါချိန်ခွင်လျှာနှင့်တိကျမှန်ကန်သောစောင့်ရှောက်လော့။
3. Customization အလုပ်ဖောက်သည်ရဲ့လိုအပ်ချက်ပေါ်မူတည်သည်သို့မဟုတ်ငါတို့နည်းပညာအဖွဲ့ထံမှဖြေရှင်းချက်ကိုရှာပါ။
ရှေ့သို့ Polyurethane စတိတ်နှင့် Flotation စက်၏ရဟတ်
နောက်တစ်ခု: Polyurethane စီတန်းသံမဏိပိုက်
Polyurethane စတိတ်နှင့် Flotation စက်၏ရဟတ်